नुहाउनको लागि प्रयोग गरिने रुमाल दोस्रोचोटीसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ? कतिचोटीको प्रयोगपछि रुमाल धुनुपर्छ ? रुमालको बनावट नै यस्तो छ कि त्यसमा सजिलै ब्याक्टेरिया बस्न सक्छ । दोसो कुरा रुमाल धेरैसमय घुलनशील हुने गर्छ । यसले ब्याक्टेरियालाई बढाउनको लागि अनुकुल वातावरण मिलाउँछ ।
यदि ब्याक्टेरियाले परिवारका एक सदस्यको संक्रमित भयो भने बाँकी सबैजना विरामी पर्न सक्छ ।
वाथरुममा प्रयोग गर्ने रुमालमा ९० प्रतिशत ब्याक्टेरिया रहने गर्छ । मलमुत्रमा हुने कोलिफार्म ब्याक्टेरिया रुमालमा पाइने गर्छ । जसको प्रयोगले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गर्छ ।
ल्याब परीक्षणको दावी के हो ?
वाथरुममा प्रयोग गर्ने केही थान रुमाल ल्याबमा परीक्षण गरेको मध्ये १४ प्रतिशत रुमालमा कोलिफार्म ब्याक्टेरिया भेटिएको थियो । कोलीफार्म ब्याक्टेरियाका कारण विभिन्न रोगहरुको संक्रमणको खतरा रहन्छ ।
कतिको घातक हुन्छ रुमाल ?
साधारणतया यसले खासै नोक्शानी पु–याउँदैन । तर शरीरमा रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भइरहेको अवस्थामा भने यसमा रहेको ब्याक्टेरियाले संक्रमणको खतरा निम्त्याउँछ ।
के रुमाल प्रयोग गर्न मिल्छ ?
साझा रुमाल कहिल्यै प्रयोग गर्नुहुँदैन । जसको कारण ब्याक्टेरिया शरीरमा सजिलै प्रवेश गर्न सक्छ । रुमाललाई नियमितरुपमा बानी गर्नुपर्छ । रुमालमा ब्याक्टेरिया कम गर्नुको यही एउटा मात्रै विकल्प हो । धोएपछि रुमाललाई राम्ररी घाममा सुकाउनुपर्छ ।
कतिपटक धुनपर्छ रुमाल ?
हरेक दुईदिनमा एकचोटी रुमाल धुनुपर्छ । रुमाल धोएपछि घाममा पुरै सुकाएपछि त्यसबाट ब्याक्टेरिया फैलिने सम्भावना हुँदैन ।
रुमाल प्रयोग गर्नबाट कसरी बच्न सकिन्छ ?
रुमाल गनाइरहेको छ भने त्यसको प्रयोग कहिल्यै गर्नुहुँदैन । गनाउनु भनेकै जीवाणु बृद्धिको संकेत हो । एजेन्सी
जमिनलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण, कहाँ पाइन्छ घर बनाउन ? काठमाडौं– सरकारले मुलुकभरको जमिन १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र, ठूला विकास परियोजनाको विकास र प्रवर्द्धनको उद्देश्यले भूउपयोग विधेयक संघीय संसदमा पेस ...